Disposable nkpuchi, FFP2 / FFP3 KN95 Mask, Nchebe Coverall - Ah-Center
AH-Centre CO., LTD na-achụ ngwaahịa ntụpọ efu; rube isi na ngwaahịa na nkà na ụzụ ọhụrụ iji jide mba elu-ọgwụgwụ ahịa, tumadi rere Japan, Europe na United States, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ na mpaghara. Ka ọ dị ugbu a, a na-anabata iwu iwu OEM ODM gị. Anyị na-agba mbọ na-eme nnyocha, n'ichepụta, ahịa na-arụ ọrụ nke nonwoven ngwaahịa.
Ihe nkpuchi ahụike nke ndị ọkachamara ahụike na-arụ n'ime ime ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ iji belata ihe ize ndụ nke mgbasa nke ọrịa, ọkachasị na ọrịa ma ọ bụ ọrịa na-efe efe. Ọ na-echebekwa onye ji ya n’aka ịgbanye mmiri mmiri nwere ike imetọ emetọ n’ọbara pụrụ iche.
Igwe ihu ihu
Na-abụghị kọntaktị temometa Mfe otu bọtịnụ mmesho, mfe arụmọrụ maka ụmụaka na afọ Iji a elu-nkenke infrared mmetụta, na-akpaghị aka na-anakọta otutu tent nke ahu okpomọkụ data na ọgụgụ isi mmezi, n'ihe na ọzọ ziri ezi na arụmọrụ bụ mụ na pụrụ ịdabere na
KN95 / FFP2 ihu nkpuchi filtration arụmọrụ (ájá-wepụ ọnụego) bụ karịa 95% nke na-abụghị mmanu mmanu particulate okwu, na iyo ihe onwunwe bụ adịghị emerụ ahụ mmadụ.
* Akwa ntị ntị na-agbanwe agbanwe na-adị mma ma ọ bụghị uko.
* Ibe imi a na-agbanwe agbanwe na-enyere aka kpuchie ihu onye ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
* Solid ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ ihu ịpị maka ike ntị akaghị ma mara mma udi.
* Disposable SMS nchebe gown ka emere site na ihe di elu nke mejuputara. Ọ nwere ọrụ nke mgbochi nje, iku ume, mgbochi osmosis, mgbochi mmiri, ọ nweghịkwa ọnụọgụ.
* Ngwongwo mkpuchi a na-ekpofu ekpofu na-adị mfe iji yikwasị maka nyocha mmiri ya na njirimara ihe eji eku ume.
* Okpomọkụ-akara SMS roba warara na-eme ka ndị kasị elu nchebe larịị.
* 2 Afọ Ogologo ndụ-na mfe ịhapụ, na-eme ya gburugburu ebe obibi.
AH-Centre CO., LTD hiwere na 2020 na Hefei, Province Anhui, yana nyocha na mmepe mmepe na ire ahịa dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ebe ọ bụ na e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ na-emepe ngwa ngwa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi mkpokọta mmepụta gburugburu 248,000 square mita .Our isi ngwaahịa gụnyere ịwa ahụ ihu mkpuchi, mkpuchi ọgwụ, Kn95 Face Mask, FFP2 mask, FFP3 mask, disposable face mask cup, infrared temometa, iche iche gowns, Anyị merela agadi mmepụta ụlọ ọrụ na akụrụngwa, ọkachamara mkpara na ahụmahụ ahịa.
Ibu ọrụ nye ndị ọrụ
Nye egwuregwu zuru oke na ikike nke onye ọrụ ọ bụla
Iku ma kwalite ndị ziri ezi
Na-akwado ma na-agba ume ka mmepe ọ bụla nke ọkachamara ọkachamara
Nye azịza bara uru na-aga n'ihu
Gbaa ndi oru ume ime mgbanwe na mgbanwe
Ibu ọrụ nye ndi otu
Mepụta gburugburu ọrụ dị mma
Chọpụta ma kwụghachi ụgwọ dị egwu
Nye onyinye ịsọ mpi na uru
Mee ka nkwukọrịta ụzọ abụọ na-aga n’ihu
Mee ka ndị ahịa nwee afọ ojuju
Ghọta ọhụụ na atụmatụ onye ahịa ahụ
Na-aga n'ihu na-akwalite ngwaahịa, ọrụ na ụkpụrụ anyị
Tụọ anya ma zute mkpa ndị ahịa
Mepụta njikọta dị mma na ndị soplaya
Ibu ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Iji zụlite azụmahịa anyị
Meziwanye uru na-adịte aka
Expmụbawanye ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa na ndị ahịa anyị
Na-etinye ego mgbe niile na ngwaahịa, ọrụ na nkwado
Ibu ọrụ nke ọha mmadụ
Omume ịgbaso usoro omume
Ime ihe n'eziokwu na iguzosi ike n'ezi ihe
Nwee ekele maka nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù
Gbaa ndi di iche-iche ume na ekele diri ndi-oruru
Mkpa ọ dị ichebe ma lekọta obodo na gburugburu ya